अमेरिका र इरान बीच चलिरहेको युद्द के हो ?| Nepal Pati
अमेरिका र इरान बीच चलिरहेको युद्ध के हो ?
एजेन्सी । अमेरिकाले इरानलाई एक ‘स्पष्ट र सिधा’ सन्देश दिनका लागि मध्यपूर्वमा आफ्नो एक युद्धपोत तैनाथ गरेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रिय सल्लाहकार जोन बोल्टनले ट्रम्प प्रशासनले यस्तो निर्णय ‘समस्या पुर्‍याउने खतरा, उक्साहटको संकेत र चेतावनीको जवाफ’ मा लिएको जानकारी दिएका छन् ।
एक अमेरिकी अधिकारीले नाम नलिने शर्तमा ईरानमा वर्तमान अमेरिकी सुरक्षाबलका सैन्य अड्डामा हमलाको आशंका गरिएका कारण अमेरिकाले यस्तो कदम उठाएको हो ।
जोन बाल्टनले कुनै पनि हमलाको जवाफ ‘निकै हल्लाखल्लासहित’ दिने बताएका छन् ।
बोल्टनले आफ्नो एक बयानमा भने, ‘अमेरिकाले अब्राहम लिंकन क्यारियर स्ट्राइक ग्रुप र एक बम्बर टास्क फोर्सलाई अमेरिकाको ‘सेन्ट्रल कमान्ड’ क्षेत्रमा पठाइरहेको छ । हामी ईरानी शासनलाई एक स्पष्ट र सिधा सन्देश दिनका लागि यस्तो गरिरहेका छौं । सन्देश यो हो कि यदि अमेरिका वा उसका सहयोगीमाथि कुनै प्रकारको हमला भए त्यसको कडा जवाफ दिनेछौं ।’
बोल्टनले आफ्नो कुरा पूरा गर्दै भने, ‘अमेरिका इरानसँग युद्ध चाहँदैन तर हामी कुनै पनि प्रकारको हमलाको जवाफ दिनका लागि पूर्ण तयार छौं, चाहे त्यो इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्डस् वा इरानको सेनाद्वारा शुरु गरिएको छद्म युद्ध नै किन नहोस् ?’
यसअघि अमेरिकाले इरानको एलिट रिभोल्यूशनरी गार्डलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादी संगठन’ को संज्ञा दिइसकेको छ ।
बीबीसीमा रक्षा मामलाका संवाददाता जोनाथन मार्कसको विश्लेषणः
अहिले अमेरिकाद्वारा इरानको कारवाहीबारे लगाइएको आरोपबारे कुनै विस्तृत जानकारी छैन । अमेरिकाको तर्फबाट जारी गरिएको चेतावनी र युद्धपोत तैनाथ गरिनुका वास्तविक कारण के हो त्यो हामीलाई थाहा छैन ।
हुन त खाडी देशमा कुनै एयरक्राफ्ट क्यारियर र युद्ध सेना पठाउनु असामान्य होइन । यद्यपी, यी क्षेत्रमा जमिन र हावामा हमला गर्ने हतियार पुनः पठाइनु थोरै असामान्य भने हो ।
हालै अमेरिका आफैंले पनि इरानमाथि दबाब बनाइरहेको छ । इरानको एलिट रिभोल्युशनरी गार्डलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय संगठन’ घोषणा गरेर होस् वा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएर होस् ।
यद्यपी, यति हुँदा हुँदै पनि ट्रम्प प्रशासनको उद्देश्य स्पष्ट छैन । ट्रम्पका प्रवक्ताले अमेरिका इरानसँग युद्ध नचाहने कुरा बारम्बार बताउँदै आएपनि उसले इरानमा सत्ता परिवर्तन गर्ने आफ्नो प्रबल इच्छालाई मुश्किलले लुकाउन सक्छ ।
अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो युद्धपोत त्यतिबेला पठाएको हो जब उसको र इरानको सम्बन्ध पहिले नै तनावपूर्ण छ ।
अहिले कस्तो छ अमेरिका र इरानको सम्बन्ध ?
यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले आफ्नो युरोप भ्रमणका बेला पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘हामीले इरानको तर्फबाट उक्साउने खालको कदम पक्कै पनि देखेका छौं र हामी आफूमाथि हुन लागेको जस्तोसुकै हमलाका लागि उनीहरुलाई नै जिम्मेवार देखाउनेछौं ।’
यद्यपी, पोम्पियोले कस्तो खालको ‘उक्साउने कदम’ भनेर जानकारी दिएका छैनन् ।
एकातर्फ जहाँ अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशलाई इरानबाट तेल खरिद नगर्न बाध्य बनाएर इरानको अर्थव्यवस्था धराशायी बनाउन चाहन्छ भने अर्कोतर्फ इरानले आफू कुनै पनि हालतमा नझुक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिका गत वर्ष इरानसमेत ६ देशबीच भएको परमाणु सन्धीबाट बाहिरिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामाको समयमा इरानसँग भएको सन्धिमा आफू खुसी नभएका कारण सो सन्धी रद्द गरेको जानकारी दिएका थिए ।
यसका साथै अमेरिकाले यमन र सिरियाली युद्धमा इरानको भूमिकाको पनि आलोचना गरेको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनलाई आशा छ कि उनी इरान सरकारलाई नयाँ सम्झौता गर्नका लागि बाध्य बनाउनेछन् र यसको दायरामा इरानको परमाणु कार्यक्रम मात्र नभई ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पनि हुनेछ ।
अमेरिकाले यसमार्फत् मध्यपूर्वमा इरानको ‘अशिष्ट व्यवहार’ पनि नियन्त्रित हुने बताएको छ ।
यस्तै, इरानले अमेरिकाको प्रतिबन्ध गैरकानूनी बताएको छ ।
इरानी मिडियाका अनुसार अमेरिकाको घोषणाको जवाफमा इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफले आफूसँग अमेरिकी प्रतिबन्धको जवाफ दिनका लागि विभिन्न विकल्प भएको बताएका छन् ।
जवाद जरिफले इरान विभिन्न विकल्पमा विचार गरिरहेको छ र यसमा ‘परमाणु अप्रसार सन्धि’ बाट अलग्गिनु पनि समावेश छ । उनका अनुसार यदि इरानलाई उसको तेल बेच्नबाट रोकियो भने यसको गम्भीर परिणाम हुनेछ ।
यसैबीच इरानका शीर्ष जनरलले यदि इरानले थप वैमनस्यको सामना गर्नुपरेको अवस्थामा आफूले सामरिक रुपमा महत्वपूर्ण होरमुज जलसन्धि मार्गलाई बन्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘यदि हाम्रो तेलको जहाज जलसन्धिबाट जाँदैन भने निश्चित रुपमा अन्य देशका तेलको जहाज पनि जलसन्धिलाई पार गर्न पाउने छैनन् ।’